Faraska Carbeed miyuu yahay kan ugu daahirsan uguna da'da weyn? | Fardaha Noti
Sida ay sheegeen taariikhyahanadu Faraska Carabta waa midka ugu da'da weyn uguna nadiifsan kuwaas oo ay jiraan diiwaanno. Waa tartan curad ah oo aan ka soo jeedin jinsi kale. In kasta oo asal ahaan aan si wanaagsan loo tixgalin sidii tobanaankii sano ee la soo dhaafay.
Tartankii Carabtii bilowgiisii ​​waxaa loo adeegsaday faras baakis inta badan iska caabintiisa. Markii dambe ayaa lagu qasay mid kale noocyo isku dhafan laakiin had iyo jeer ka horreeya dhiigga saafiga ah ee faraska Carabta.
Sheekadu waxay sheegaysaa in faraskii ugu horreeyay ee Carbeed ay Hindiya ugu yimaadeen gacanta Marco Polo. Ganacsatada ayaa bixiyay lacago badan oo loogu talagalay tijaabooyinkan tijaabada ah. Waxa kale oo jiray maraakiib badan oo ku soo dhowaaday dekedaha, gaar ahaan gacanka Beershiya, oo ay ku raran yihiin muunadarado Carbeed.
Reer Mongolisku waxay ahaayeen kuwa jecel faraska wanaagsan iyo quruxdiisa. Si kastaba ha noqotee, waxay ahayd illaa qarnigii XNUMXaad markii la soo dejiyey faraska Carabtu ogaatay iyo dhabtiisa ka soo dejinta Khaliijka, Iiraan iyo Ciraaq. Feejignaan dheeri ah ayaa la siiyay xawaareheeda, markaa waxaa loo tixgeliyaa inay tahay nooc dhab ah, oo loogu talagalay tartanka, si sax ah sababtoo ah dhaqdhaqaaqeeda.
Waa xidid aasaasi ah, oo aan laga soo qaadin mid kale. Wuxuu leeyahay hadiyadda, taas oo kaliya jinsiyadaha saafiga ah ee runta ah ay wadaagaan, oo ah qadarin buuxda oo ku saabsan isirkiisa dhaxalka iyo awoodda aan la helin ku shaabadee dabeecaddaada jinsi kasta oo kale adoo adeegsanaya awood aan la diidi karin. Carabku waa asalka ugu weyn uguna sharafta badan qowmiyadeena jinsiyadaha, kuwa ugu fiican Waqooyiga Afrika iyo kuwa ka soo ifbaxa adduunka oo dhan, ayay qortay Lady Wentworth, oo ah fardaha carbeed ee saafiga ah.
Taasi waa sababta loogu yeero Carabiga aabbaha jinsiyadaha oo dhan. Sababtoo ah waa tan kaliya ee dhabta ah ee daahirka ah, iyada oo aan laga tallaabin. Qaar ka mid ah jinsiyadaha la sameeyay ayaa ka dheereeya, ka weyn, ka booda. Laakiin midkoodna ma laha quruxdiisa, dabeecaddiisa, ama shaabaddiisa gaarka ah ama kala soocidda.
Doorka uu ku leeyahay taariikhda waa la aqoonsan yahay maxaa yeelay dhiiggoodu waa qayb ka mid ah jinsiyadaha casriga ugu badan fardaha. Waxaa la dhihi karaa maanta khadadka carabta waxaa laga heli karaa ku dhowaad nooc kasta oo fardo fuushan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Faraska Carbeed miyuu yahay kan ugu daahirsan uguna da'da weyn?
Maqaalka ku saabsan taariikhda dhabta ah ee faraska Carabta waa mid aad u fudud, oo loo tixgeliyo inuu yahay kan ugu nadiifsan tartamada faraska adduunka, gaar ahaan faraska Beershiyaanka ee Beershiya oo loo yaqaan nooca ugu fiican.
Waxaa jira maqaal aan ka akhriyey buug uu faraskii maraykanku ugu magac daray MUSTANG. Noocani wuxuu ahaa taranka aaminka ah ee loogu yeero Hindida Mareykanka. PINTO-ka caanka ah wuxuu ahaa mid dhaqso badan oo adkaysi leh wuxuuna helay xawaare ka badan kan faraska tartanka.
Ku jawaab Rafael Zamora Tulliano